Home / blog / Ndụmọdụ Blọ mposi Kachasị Mma Mgbe Niile, All Na Otu Ebe!
2020 / 10 / 16 nhazi ọkwablog 1180 0
Naanị n'ihi na ụlọ ịsa ahụ dị ezigbo mkpa na ndụ kwa ụbọchị, yabụ mgbe ị na-achọ ụlọ ịsa ahụ mma, anyị ga-ejikwa akụkụ niile nke nkọwa ahụ, iji gbalịa izere mmetụta nke ndụ kwa ụbọchị.
Ime ụlọ ndozi ndetu
1,Debe mmiri na ọkụ eletrik
Lọ ịsa ahụ ime ụlọ, ọtụtụ ite ndị enyi na-echefukarị ịchekwa ikike ndị ọzọ na mmiri mmiri, emesịa gbanwee ụlọ mposi mara mma na akwa nhicha eletriki nwere ike ibute iji nsogbu.
2,Mgbidi na Tlọ Nsogbu Nsogbu
Mee ọ dịkarịa ala awa 24 tupu ịpịa taịl nile mechiri mmiri mmiri; taịl nile na taịl nile nke mgbidi site na nkedo nke onuete, mepee taịl nile iji hụ na ihu brik nwere 1 Celsius banyere mkpọda nke drain ahụ, mkpọda kwesịrị ịdị n'akụkụ ala ahụ.
3, Akọrọ na Wet Iji Kewaa
Ọ bụrụ na ụlọ mposi adịghị iche na mmiri na akọrọ, ọ dị mfe ime ka mmiri na-agbapụta ebe niile na igwe ịsa ahụ, ọ dịkwa mfe maka ndị mmadụ ịmịcha ma daa, nke na-adịghịkwa enye aka ihicha.
4,Kedu ihe ga - abụ nsogbu ma ọ bụrụ na anyị jiri ụlọ mposi Smart Smart dochie Tolọ mposi nkịtị?
Mgbe ị na-etinye ụlọ mposi ndị nkịtị, ndị ọrụ n'ozuzu ha anaghị eleba anya na mmiri na ọkụ eletrik na-esote, enweghị ọnọdụ ụlọ mposi edobere maka ike ọkọnọ siri ike, ntanetị na ụzọ mmiri, iji ụlọ mposi mara mma ga-esiri ike n'ọdịnihu.
Ilelọ mposi Ntughari Nsogbu Ndị A Na-ahụkarị
1, Kedu nke bara uru karị, ịsa ahụ ka ọ bụ ụlọ ịsa ahụ?
N'ozuzu, ịsa ahụ kwesịrị ịdị irè karịa ịsa ahụ, ịsa ahụ na-adịkwu oge ma na-adaba adaba ma dị irè, dịtụ mma.
2,Bụ The ákwà ngebichi Mfe Mfe Iji?
Maka obere ezinụlọ, mpaghara nke ime ụlọ ịwụ ahụ pere mpe, iko nke iko ga-eme ka ụlọ ịsa ahụ mbụ dị obere buru oke ibu. Mgbe ahụ, ákwà ngebichi ịsa ahụ dị ka nkewa, mgbe ahụ ohere niile dị na mgbasa ahụ sara mbara ma na-emesapụ aka karị.
3, Ime roomlọ ịsa Ahụ ahọpụtara ahọrọ Mozis, Ma ọ bụ Ọcha Dị Ọcha na nke Dị Ọcha?
Mmetụta ịchọ mma Mosaic dị mma, mana ọnụ ahịa nke ihe na ọrụ dị oke ọnụ. Mosaics siri ike ilekọta ma na-ezobe unyi. Ya mere, gbalịa iji ya na mpaghara akọrọ!
4,Ọnọdụ Osimiri Countertop Abụghị Uru? Kedụ ka ị si ahọta n’etiti otu ọkpọ na ebe okpuru ala?
Efere countertop nwere ọtụtụ ọdịdị, nhọrọ buru ibu na nsonaazụ ịchọ mma dị mma. Ọ dị mfe ịwụnye ma dịkwa mfe ilekọta n'ọdịnihu. Otú ọ dị, mmiri dị mfe ịsọpụ n'èzí mgbe ị na-eji efere ahụ n'elu tebụl.
N’okpuru okpokoro tebụl ga-agbanye n’ime etiti tebụl ahụ, nke mara mma karịa ọkwa ahụ, na ọkwa ala a dị ala karịa tebụl ahụ, yabụ mmiri dị n’elu tebụl ahụ nwere ike ịba n’ime ma ọ bụ hichaa ya n’efere , ya mere ahụike ka mma ilebara anya.
5,Ala Igbapu mmiri na Socket
A ghaghị iji nlezianya tụlee ọnọdụ nke ala drain ahụ, ọkacha mma dị n'otu akụkụ nke taịl ahụ, ọ bụrụ na ọ dị n'etiti ime ụlọ ịwụ ahụ, mgbe ahụ, ala ala agaghị abụ ebe dị ala n'agbanyeghị agbanyeghị taịlị ahụ.
Ekwesiri ime ka ogwe aka megharia ya, karisie na ime ụlọ ịwụ mmiri ọkụ eletrik na mgba ọkụ kwesịrị ekwesị. Na-esote sink dị mkpa ka ịhapụ ụfọdụ ole na ole maka ngwa ndị a na-ahụkarị dịka ndị na-ehicha ntutu, agụba na ezé ezé eletrik!
6,Ilelọ mposi Iyuzucha Fan
Ime ụlọ ịwụ ahụ dị mmiri mmiri karị ma nwee ike ibute nje, yabụ, a ga-arụnye ihe na-ekpocha ọkụ n'ime ime ụlọ ịwụ ahụ, nke na-edozi nsogbu nke iru mmiri na oghere ma na-eme ka ụlọ ịsa ahụ dị ọhụrụ ~.
7,Nhazi nke Oke Nrụ Ọ bụla
Nke gara aga :: 4.95dị Scandinavian nke 2mXNUMX, Blọ ịsa ahụ Di na Nwunye a dị ịtụnanya karịa ime ụlọ ebe a! Osote: Ezinụlọ ndị China, Ọ bụ na ha erughị eru nkewa nke atọ?
Smart, Kpọtụrụ, Crossover Na-aga Mainstream! New Foreign ụdị Bathroom Ex ...